RW Rooble "Guul ayuu noogu dhammaanaa shirka" | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble “Guul ayuu noogu dhammaanaa shirka”
Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xil gaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa tilmaamay in si buuxda loogu diyaar garoobay qabashada shirka arrimaha doorashooyinka looga hadlayo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee Doorashooyinka ayaa lagu wadaa inuu ka dhaco magaalada Muqdisho, iyadoo xafiiska Ra'iisul Wasaaraha uu tilmaamay in si aada loogu diyaar garoobay qabashada shirkaasi oo lagu wado in ay natiiijo wanaagsan kasoo baxdo.
"Waxaan u diyaar garownay shirka golaha wadatashiga qaran ee dhammeystirka arrimaha doorashooyinka, waxaan filayaa in uu si habsami ah noogu furmo, guulna noogu dhammaado si uu dalku u aado doorasho daah furan oo heshiis lagu yahay" ayuu yiri RW Rooble.
"Waxaa iga go'an fududeynta wax kasta oo horseedi kara in uu shirkani guuleysto" ayuu sii raaciyay RW Rooble, wuxuu u mahad celiyay siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed ee taageerada u muujiyay RW Rooble waxa uuna ka codsaday in lagarab istaago.
Rooble ayaa markan lagu ammaanay in uu u muuqdo mid qaadan doona doorkiisa arrimaha doorashooyinka, isagoo garab buuxa ka helaya Beesha Caalamka iyo qaar kamida siyaasiyiintii mucaaradka ee kasoo horjeeday madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo iyo sidoo kale qaar kamida madaxda dowlad goboleedyada oo dabacsanaan u muujiyay.